नारायण अधिकारी सोमबार, चैत ३०, २०७७, १८:०१
काठमाडौं- विगत दुई महिनादेखि प्रहरीको टाउको दुखाई बनेको पोखरा गोलीकाण्ड घटना लगभग सुल्झिएको छ। ६७ दिनपछि गोलीकाण्डका अभियुक्त परेका छन्। तर, घटनासँग जोडिएका केही प्रश्न भने अझै पनि अनुत्तरित छन्। जसलाई प्रहरीले पूर्ण अनुसन्धानपछि खुलाउने बताएको छ।
गत माघ २३ गते साँझ ७ बजेतिर पोखरा महानगरपालिका-१७ महतगौडा नौलो घुम्ती नजिकै पर्वतको मोदी गाउँपालिका-८ चित्रे घर भएका २७ वर्षीय मनोज विकमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट घाइते भएका उनको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ।
सोही घटनामा संलग्‍न भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले एक जनालाई पक्राउ गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। बाराको बरियापुर नगरपालिका-४ पिपरावृताका ४५ वर्षीय राजकिशोर पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको कास्कीका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले नेपाल लाइभलाई बताए। उनलाई कास्कीकै सिमपानीबाट आइतबार पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उनको साथबाट ७.६ एमएमका ३ राउण्ड गोलीसमेत बरामद गरेको एसपी श्रेष्ठले बताए। पक्राउ परेका पाण्डेविरुद्ध हातहतियार तथा ज्यान मार्ने उद्योगको कसूरमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट म्याद लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
यसरी भयो गोली प्रहार
फेवाताल किनारको भकुण्डे भन्‍ने ठाउँमा चिया पिउने क्रममा मनोज र राजकिशोरबीच चिनजान भएको थियो। त्यसबेला राजकिशोरले आफू ठेकेदार भएको बताएका थिए। मनोज भने पोखरामा वायरिङको काम गर्थे। राजकिशोरले आफू ठेकेदार भएको बताएको र मनोज वायरिङको काम गर्ने भएपछि घर बनाउँदा वायरिङको पनि काम हुने भएकाले उनीहरूको सम्पर्क बढ्दै गयो। राजकिशोरले पोखराकै दोबिल्लामा १० कोठे घर बनाउँदै रहेको पनि त्यसबेला बताएको गोली लागेका मनोजले प्रहरीसमक्ष बताएका छन्।
घटना भएको दिन माघ २३ गते राजकिशोरले मनोजलाई फोन गरे। कहाँ-कहाँ बत्ती राख्‍ने सबै मिलाउनुपर्‍यो, तिमीले काम गर भन्दै राजकिशोरले मनोजलाई भने।
दोबिल्लामा बन्दै गरेको घरमा बत्ती जडानका लागि जान मनोज तयार भए। मोटरसाइकलमा जाँदै गरेको बेला राजकिशोरले महतगौडा नौलो घुम्ती पुगेपछि ‘साहुलाई फोन गरौं अनि जाऔं’ भने पनि मोटरसाइकल रोकेर चौतारोमा बसेको केहीबेरमै पेस्तोल निकालेर गोली हानेको मनोजको भनाइ छ। मनोजको पेटमा गोली लाग्यो। त्यसपछि राजकिशोर मोटरसाइकल चढेर फरार भएका थिए।
गोली लाग्दा पनि मोटरसाइकल चलाएरै प्रहरी कार्यालय
गोली लागेर घाइते भएका मनोज मोटरसाइकल चलाएर रगत चुहाउँदै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। दाहिने कोखा (पेटको भाग)मा अगाडिपट्टीबाट प्वाल परी पछाडि ढाडको भागमासमेत चोट लागेको अवस्थामा मनोज इलाका प्रहरी कार्यालय बैदाम पुगेका थिए। करिब पाँच किलोमिटर टाढाबाट उनी मोटरसाकइल चलाउँदै प्रहरी कार्यालय पुगेर घटनाबारे बताएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई गण्डकी मेडिकल कलेज उपचारको लागि पठाएको थियो। सुरुआती जाँचको क्रममा डाक्टरले मनोजलाई गोली लागेको भन्दा पनि धारिलो हतियार प्रहार भएको बताएका थिए। मनोजले गोली प्रहार भएको बताएपछि पुनः जाँच गर्दा गोली नै लागेको भन्‍ने पुष्टि भएको थियो।
प्रहरी घटनास्थल गएर अनुसन्धान गर्दा गोलीका खोका भेटिएको थियो। गोली प्रहार गरी हत्या गर्न लागेको भन्‍ने पुष्टि भएपछि प्रहरीले चासोका साथ यो घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। अन्ततः दुई महिनापछि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ।
अनि पक्राउ परे राजकिशोर
घाइते मनोजले घटनाबारे सबै बेलिविस्तार लगाएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि थप सहज भएको थियो। गोली प्रहार गर्ने हुलियादेखि मोबाइल नम्बरसमेत मनोजले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएका थिए। उक्त हुलिया र मोबाइल नम्बरमार्फत् खोजी सुरु गरेको प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति राजकिशोर नै भएको पत्ता लगाएको थियो।
बारा घर भई पर्साको वीरगञ्‍ज आदर्शनगरमा बस्‍ने गरेको जानकारी पाएपछि कास्की प्रहरी पटक-पटक उनलाई रोज्दै बारा, पर्सा पुगेको थियो। तर, पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्। दुई महिनापछि राजकिशोर पोखरा छिरेको भन्‍ने सूचना पाएपछि उनको निगरानीमा खटिएको प्रहरी टोलीले राजकिशोरलाई पोखराकै सिमपानीबाट पक्राउ गरेको हो।
खोइ पेस्तोल? किन हानियो गोली?
प्रहरीले राजकिशोरलाई सार्वजनिक गरे पनि दुई वटा प्रश्न भने अहिलेसम्म अनुत्तरित छन्। उनीबाट तीन राउण्ड गोली बरामद भए पनि पेस्तोल बरामद हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ मनोजलाई गोली हान्‍नै पर्ने कारण पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन।
यसबारे कास्कीका एसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले नै यही कारणले गोली हानेको भन्‍न सक्ने अवस्था छैन। हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौं। त्यो कुरा पछि खुल्ला।’
त्यसैगरी, प्रहरीले गोली बरामद गरे पनि गोली हान्‍न प्रयोग गरिएको पेस्तोलको अवस्थाबारे पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। उनले गोली हान्‍न कहाँबाट पेस्तोल ल्याए, अहिले कहाँ छ त्यो पेस्तोल भन्‍ने प्रहरी अन्योलमै छ।
मनोजलाई लागेको गोली र प्रहरीले अहिले बरामद गरेको गोली म्याच नखाएको अनुसन्धानमा संलग्‍न एक अधिकृतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। प्रहरीले अहिले ७.६ एमएमका तीन राउण्ड गोली बरामद गरेको छ। तर, मनोजलाई हानेको गोली भने अर्कै रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको ती अधिकारीले बताए।
‘घटना रहस्य देखिन्छ। मनोजलाई लागेको गोली र बरामद भएको गोली म्याच खाँदैन’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘किन गोली फेरियो? वा राजकिशोरसँग अन्य किसिमका पनि हतियार छन् भन्‍नेबारे प्रश्न उब्जिएको छ।’ गोली फरक-फरक परेपछि प्रहरीले यो कोणबाट पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
मनोजलाई लागेको गोली र बरामद गोली फरक फरक भएको एसपी श्रेष्ठले पनि स्वीकार गरे। पोखरामै यसअघि पहिलोपटक २०७६ साउन १ मा पनि पेनगनसहित लागूऔषध कारोबारी सागर रानाभाटलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
त्यसभन्दा अघि नेपालमा पहिलोपटक २०६८ असारमा पेनगनसहित काठमाडौंबाट दुई जना पक्राउ परेका थिए। कलम आकारको पेनगनको टुप्पोतर्फको भागमा गोली राख्‍न मिल्ने हुन्छ। रिफिल हुने ठाउँमा स्प्रिङ हुन्छ भने आउटरमा गोली हुन्छ। पेनको क्लिपले ट्रिगरको काम गर्छ।
भारतीय नागरिकको भेषमा डाक्टर बनेका १२ नेपालीको मुद्दा : अनुसन्धान गर्नै नपाइ काउन्सिलले गर्‍यो ‘फाइल क्लोज’
२४ हजार भारु पर्ने रेमडिसिभिरलाई १ लाख २० हजारमा बेच्ने पक्राउ रेमडिसिभिरमा कालोबजारी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले गोरखाको आरुघाट घर भई काठमाडौं बस... बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
तनहुँमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु बिहीबार, वैशाख २३, २०७८